Iindaba ze-Android: ukukhutshwa, iindaba, amarhe kunye nokunye! | I-Androidsis (iphepha 14)
IVivo Nex 2 Ukuvuza kwiGeekbench ngaphambi koPhehlelelo: i-SD845, i-10GB ye-RAM kunye neDatha engaphezulu ityhilwe
IVivo Nex 2 igqityiwe ukuvuza kwiGebenbench kunye neempawu zayo eziphambili kunye neempawu zayo. Siyakwandisa!
I-OPPO iya kuyilahla itekhnoloji yayo yokutshaja ngokukhawuleza kwi-SuperVOOC kwezinye iimveliso
Fumana ngakumbi malunga nelayisensi evumela i-SuperVOOC, i-OPPO ukuhlawulisa ngokukhawuleza ukuba isetyenziswe ngamanye amagama kwi-Android.
Isamsung iphatha umboniso ojikelezayo weefowuni ezizayo ngaphandle kweezels
I-patent entsha ye-Samsung ivele. Oku kubandakanya ubhaliso lwefowuni ngaphandle kweezel. Isikrini esibonakalayo siyatshonisa.
UGoogle ususa inkxaso kwi-Android 4 Ice Cream Sandwich
Fumanisa ngakumbi malunga nesiphelo senkxaso uGoogle ayinikela kwi-Android 4 Ice Cream Sandwich njengoko inkampani sele ibhengezile ngokusemthethweni.
Igosa: iVivo Nex 2 iza kuphehlelelwa nge-12 kaDisemba
IVivo ilungiselela ukumilisela iVivo Nex 2, iselfowuni eya kuthi iphumelele kwi-flasgship yayo yangoku. Umsitho wokuphehlelelwa uza kuba nge-12 kaDisemba.
Ukuphonononga iHuawei Mediapad M5 Lite ithebhu ngeStylus engenanto yakwenza nomona nge-iPad. Ewe ewe, ixabiso layo!
Ngeli thuba, ukongeza kukuzisela uphononongo lwevidiyo olupheleleyo lweHuawei Mediapad M5 Lite, ithebhulethi entsha ye-Android ...
Inguqulelo ye-5G yeNubia X iya kubhengezwa ngoDisemba 10
I-Nubia iya kuzisa uhlelo lwe-5G lwe-Nubia X ngo-Disemba 10, ngokwe-poster esemthethweni esandula ukutyhilwa yi-CEO.
I-PUBG Mobile ingu-0.10 izakufika ngoDisemba 20 ngemephu entsha yekhephu yaseVirkendi
Usuku oluzele ziindaba ngazo zonke ezo zinto ziya kuza kwinguqulelo eyi-0.10 ye-PUBG Mobile kwaye ibandakanya ...
I-HMD Global ityhila ukuthengiswa kweefowuni zakwaNokia kule minyaka mibini idlulileyo
Fumanisa ngakumbi malunga nentengiso iNokia ebinayo kwihlabathi liphela kule minyaka mibini idlulileyo njengoko iqinisekisiwe yiHMD Global
INokia 3.1 Plus ifika ngokusemthethweni eSpain
Fumana ngakumbi malunga nokuqaliswa kweNokia 3.1 Plus eSpain, ixabiso eliza kuba nalo kunye neevenkile apho ungathenga khona ifowuni.
I-Mediatek's Helio M70 5G iya kuqala ukuhambisa kunyaka olandelayo
I-Mediatek ibhengeze kwaye yazisa i-Helio M70 e-China. Inkampani ithi sele ikho kwaye izakuqala ukuhanjiswa kunyaka olandelayo.
UXiaomi ubonakalisa amava okubizwa kwevidiyo ye-5G kunye nohlobo lwe5G lweMi MIX 3
UXiaomi ubonakalisa amava okubiza ividiyo ye5G ngeMi MIX 3 5G kumsitho obuse China. Sandisa iinkcukacha zoku!
Iqinisekisiwe: I-OnePlus izokwazisa i-smartphone yokuqala ye-5G nge-Snapdragon 855 ekuqaleni kwe-2019 eYurophu
Ngokuka-OnePlus, i-smartphone yokuqala eYurophu iya kuphehlelelwa yile nkampani inye. Izakufika kunye ne-Snapdragon 855, elinye igama, nasekuqaleni kuka-2019.
I-Samsung Galaxy A50 ihamba ngeGeekbench kunye ne-Exynos 9610
I-Samsung Galaxy A50 ibhalisiwe kwindawo yedatha yeGeekbench kunye nomprosesa ophakathi ophakathi we-Exyos 9610 processor.
Imbeko yokwazisa ngekhamera yekrini ngoJanuwari
Fumanisa umhla oza kunikezelwa ngawo ifowuni entsha ye-Honor, eya kuthi ifike ngekhamera ehlanganisiweyo kwiscreen sayo.
Olu luhlaziyo ngokutsha lwe-Instagram oluza kuza kungekudala
I-Instagram izakufezekisa utshintsho olukhulu kwiindaba zayo ezondla ngenguqulelo entsha engekafiki kwi-Android kunye ne-iOS.
INokia 8.1: Inqanaba elitsha eliphakathi le-premium ngoku lisemthethweni
Fumanisa ngakumbi ngeNokia 8.1, yefowuni entsha yeNokia yepremiyamu yefowuni etyhilwe ngokusemthethweni. Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa.
Igosa: i-Nubia Z17 iya kufumana i-Android Pie kungekudala
Ekugqibeleni iqinisekisiwe: I-Nubia Z17 yeZTE iya kufumana uhlaziyo kwiPie ye-Android 9.0 kungekudala, nangona ingaziwa ukuba ngubani kanye kanye.
I-Meizu C9, isiphelo esisemthethweni esisungulwe ngokusesikweni nge-18: 9 kwesikrini nangaphezulu
I-Meizu C9 sele isemthethweni. Yazi zonke iimpawu, iinkcukacha zobuchwephesha, ixabiso kunye nokufumaneka kolu luhlu luphantsi.
Meizu M6T, i-smartphone entsha enomgangatho ophezulu / umgangatho wexabiso
I-Meizu M6T isungulwe ngokusesikweni e-India. Yazi iimpawu zayo, iinkcukacha zobugcisa, ixabiso kunye nokufumaneka.
Umongameli weXiaomi uyacebisa kusungulo lwefowuni enekhamera ye-48 MP
UXiaomi uzokwazisa i-smartphone enekhamera ye-48-megapixel kunye ne-flash ezimbini ze-LED ngasemva, ngokwe-teaser etyhilwe ngumongameli.
Ezona fowuni zinamandla zi-10 zangoNovemba ka-2018, ngokwe-AnTuTu Benchmark
I-AnTuTu isizisela udidi lwee-smartphones ezili-10 ezinamandla kwinyanga kaNovemba yalo nyaka. Siyakubonisa!
Ukujonga kwakhona i-BLU VIVO XI +
Sivavanye i-BLU VIVO XI +, ikhamera ezimbini, i-6GB ye-RAM, ukubonwa kobuso nokunye okuninzi, eyona nto iphambili kuluhlu olungaphantsi kwe- € 300
IHuawei iceba ukuhambisa izixhobo ezizigidi ezingama-200 kwihlabathi liphela kunyaka olandelayo
IHuawei iceba ukuthumela malunga nezigidi ezingama-200 zezixhobo ezinxibekayo kunyaka olandelayo IXiaomi, kwelayo icala, ikwanethemba lokunyusa ukuthunyelwa kwayo.
Fumanisa ngakumbi malunga ne-Snapdragon 855, iprosesa entsha ye-Android ephezulu yesiphelo evela kwiQualcomm eza ne5G kwaye yenziwe kwi7 nm.
UGoogle ususa ii -apps ezimbini ezithandwayo kwiCheetah Mobile kunye neKika Tech
Iapps ezimbini ezaziwayo ezivela kuCheetah Mobile kunye neKika Techa azisafumaneki kwiVenkile yeGoogle Play. Basuswe nguGoogle.
Imidlalo Epic isungula ivenkile yayo yemidlalo ye-Android
Fumanisa ngakumbi ngeVenkile yeMidlalo ye-Epic, ivenkile yomdlalo ovela kubadali beFortnite beza kwi-Android kwangoko kunyaka olandelayo.
I-Honor Magic 2 ifumana uhlaziyo olutsha olukuvumela ukuba wazi iikhalori ekutyeni kwakho
I-Honor Magic 2 ifumana uhlaziyo oluninzi ukusukela oko yasungulwa, nganye ingcono kunenye kwaye ...
I-Android Pie ilibazisekile kwiNokia 8, kodwa ukufika kwayo kusondele
Uhlaziyo lwePie ye-Android yeNokia 8 yalibaziseka, kodwa uJuho Sarvikas, umphathi weNokia, uthe izakufika, njengoko bekulindelwe.
IVingrup, elona qela lobuchwephesha likhulu eVietnam, ithatha uninzi lwe-BQ
Fumanisa ngakumbi malunga nokusebenza oko kuthetha ukuba i-51% ye-BQ idlula ezandleni zeVingrup, elona qela likhulu lobuchwephesha eVietnam.
UMzantsi Korea uzakukhupha inethiwekhi ye5G ngoMgqibelo: iya kuba lilizwe lokuqala ehlabathini ukuyithengisa
UMzantsi Korea ukulungele ukubetha i-United States yaseMelika kunye ne China ukuba bavele njengelizwe lokuqala ukuphumeza itekhnoloji ye5G.
Isamsung iya kutyhila ngokusesikweni i-Galaxy A8s kwifowuni yayo yokuqala yokubonisa ngoDisemba 10 phambi kweHuawei.
Ukucaciswa kunye nemifanekiso yeHuawei Nandipha i9 zivuzisiwe ngaphambi kokumiliselwa kwayo
I-Huawei Yonwabele i-9 iye yavuza imifanekiso kunye neenkcukacha zayo zobugcisa. Iya kuba ngumahluko oqhelekileyo we-Enjoy 9 Plus.
Ezi zinto zibonisiweyo zibonisa i-Samsung Galaxy S10 Plus njengoko izakufika kwintengiso. Iikhamera ezi-5, uhlobo lwe-infinity-O kunye nokunye.
Abasebenzisi bakaGoogle Hangouts baya kutshintshela kwi-Hangouts Chat kunye nokudibana
Fumanisa ukuba zeziphi iinkqubo eziza kuthatha indawo yeGoogle Hangouts xa usetyenziso lusemthethweni.
UHelio P90 ovela kwiMediaTek sele enawo umhla wokubonisa
Fumanisa ngakumbi malunga nomhla wokubhengezwa ngokusesikweni kukaHelio P90, iprosesa entsha yeMediaTek, ngoDisemba 13.
IMotorola One, uhlalutyo olunzulu lweli banga liphakathi
Uluhlu oluphakathi lubuyela kumthwalo ngexesha apho iifemu ezinkulu zinobunzima ngakumbi nangakumbi.
I-Hangouts kaGoogle sele inokuba nomhla wokuvalelisa
Fumanisa ngakumbi malunga nokuphela kwemiyalezo yeGoogle Hangouts enokuthi igxothwe ngokusemthethweni ngo-2020.
Fumana ngakumbi malunga nenombolo yeefowuni eziye zafunyanwa eFrance ngokukhupha inqanaba lemitha ephezulu kunokuba kuvunyelwe.
Iinkcukacha ezithe kratya ziyavela kwi-Asus ZenFone Max Pro M2 kunye neZenFone Max M2
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, ulwazi olubalulekileyo malunga neefowuni ze-Asus ezizayo zavuza. Ukusukela ngoko, umzi mveliso we ...
Ifowuni elandelayo yeVivo iye yavuza imifanekiso ngokupheleleyo: uluhlu olutsha lokungena luza
I-smartphone entsha engummangaliso yeVivo ifumene isatifikethi esivela kwi-NCC eTaiwan-isiphelo esitsha esisezantsi siza.
Ityala elikhethekileyo leekhamera ezi-5 ezenziwe nguGoogle ukulungiselela indlela yeParrait yePixels
Ityala elineekhamera ezi-5 likwazile ukunika ulwazi oluyimfuneko ukuze iPortrait Mode yePixel 3 iphuculwe.
Imiqondiso yokuhamba usiya phambili nasemva uza kwiChannel ye-Android kungekudala
Kuyakubakho izimbo zomzimba ezimbini zokuhamba kwi-Chrome: phambili nasemva. Ngale ndlela amava omsebenzisi alungiselelwe.
I-Pokémon GO, nantsi indlela esebenza ngayo uSuku loLuntu
I-Pokémon GO ihlaziywa ngoSuku loLuntu ngokusinika ithuba lokuzingela inani elikhulu lePokémon entsha yokongeza kwiPokédex yethu.
Kusemthethweni: UHuawei uqinisekisile ukuba bayasebenza kwinkqubo yabo yokusebenza, enye indlela eya kwi-Android. Fumana izizathu.
Fumanisa umsebenzi omtsha wokulinganisa umsebenzi kuFacebook ukuze ukwazi ukujonga ixesha olichitha mihla le kwisicelo.
Iziyobisi eziveliswa nguFortnite "zomelele njengeziyobisi"
Umlutha obangelwe ngumdlalo weMidlalo ye-Epic, iFortnite, mkhulu kangangokuba uninzi lubanga ukuba luyafana nolubangelwa ziziyobisi.
I-OnePlus 3 kunye ne-3T zifumana uHlaziyo oluNtsha lokuzisa ukuhambelana kwiiBlack-Type ze-headphone kunye nokunye
Ukuhanjiswa kohlaziyo olutsha lwe-OnePlus 3 kunye ne-OnePlus 3T kuqalile. Uhlaziyo luza njenge-OxygenOS 5.0.7.
Iqinisekisiwe: Nxamnye nokutyhila iFowuni yeFowuni kwiMWC19
Igosa: Ngokutsho kwe-CEO ye-Oppo, ifemu iya kuzisa i-smartphone esongekayo kwi-2019 Mobile World Congress.
Ushicilelo lwe-OnePlus 6T McLaren luya kufika nge-10 GB ye-RAM kunye ne-256 GB yememori yangaphakathi
Ingxelo entsha icebisa ukuba i-OnePlus 'elandelayo ye-smartphone, i-OnePlus 6t McLaren Ediion, iya kufika kwimarike nge-10GB ye-RAM kunye ne-256GB yeROM.
Ekugqibeleni iimephu zikaGoogle zihlaziya imenyu yokuhamba ecaleni
Imenyu yokukhangela kukugxila kuhlaziyo olutsha lweMaphu zikaGoogle. Eli xesha licociwe kwaye yonke into icacile.
Amandla eMoto G7 aqinisekisiwe ngebhetri ye-5000 mAh nangaphezulu
Amandla e-Motorola Moto G7 aqinisekisiwe yi-FCC ngama-5,000 mah amandla ebhetri nangaphezulu. Njengazo zonke iinkcukacha ezifunyanisiweyo.
Ipie ye-Android 9.0 iyasondela kwiNokia 8: ukufika kwayo kusondele
INokia 8 iye yavuza iGeekbench, isebenzisa i-Android 9 Pie njengenkqubo yokusebenza kwayo: ukwamkelwa kwayo kusondele. Siyakwandisa!
IMoto X4 iqala ukuhlaziya kwiPie ye-Android 9
I-Moto X4 sele iqalile ukuhlaziya kwi-Android 9 Pie eBrazil ukuze silindele ukuba ifikelele kuzo zonke izixhobo kwiiveki ezizayo.
I-Realme U1 ngoku isemthethweni. Yazi onke amanqaku, amaxabiso, ukufumaneka kunye nefowuni yokuqala yeHelio P70!
IHuawei Nova 4 iqinisekisa uyilo lwayo ngemifanekiso emitsha yokwenyani
Uthotho lwemifanekiso yokwenyani yeHuawei Nova 4 iye yavuza apho sinokuthi siqinisekise uyilo lwayo olume ngaphandle kwikhamera yangaphambili ebethelelwe.
UMIDIGI One Max, i-smartphone entsha yenkampani eneHelio P23
I-UMIDIGI One Max sele isemthethweni: yazi zonke iimpawu, iinkcukacha zobugcisa, ixabiso kunye nokufumaneka kwesi sixhobo sitsha.
Umdlalo we-Nubia Red Magic Mars udlala ngokusesikweni nge-10 GB ye-RAM kunye nokunye
I-Nubia Red Magic Mars sele isemthethweni: yazi zonke iimpawu, iinkcukacha zobuchwephesha, amaxabiso kunye nokufumaneka kwale mobile yokudlala.
Ngoku ungafaka i-Android 9 Pie beta kwi-Samsung Galaxy S9 yakho eSpain
Abo kuni bane-Samsung Galaxy S9 ngoku banokonwabela i-Android 9 Pie njengoko i-beta ifumaneka ukusukela namhlanje.
Abasebenzisi beHuawei banemali ngaphezu kwabasebenzisi be-Apple, isifundo esitsha sifumanisa
Isifundo esitsha esikhutshiweyo siveza ukuba abasebenzisi beHuawei okanye ezinye iimveliso zaseTshayina banengeniso ephezulu yenyanga kunezo zePhones.
Ungayicima njani inombolo yefowuni enxulumene neakhawunti yethu kaGoogle
Ngalo lonke ixesha sivula iakhawunti ye-imeyile, njengomgaqo oqhelekileyo, inkonzo ayiceli nje kuthi ...
Zitshintshe ube ngumlinganiswa we-3D kwi-ZEPETO: thetha, thengisa kwaye uthathe iifoto kunye nabahlobo bakho
Uhlelo lokusebenza lwe-gepeto, okanye endaweni yoko lubizwa ngokuba yiZepeto, lusivumela ukuba sibe ngumlinganiswa we-3D ukuze sithathe inxaxheba ...
I-Samsung Galaxy S10 Plus ihamba nge-AnTuTu kunye ne-Exynos 9820
I-Samsung Galaxy S10 Plus igqithile kwi-AnTuTu nge-Exynos 9820 kunye nolunye ulwazi. Iya kuba yenye yeefowuni ezinamandla ze-2019.
Njengaye, enye indlela eyiyo yeTik Tok
Ixesha lokudlala labantwana baseTshayina linqunyulwe kwisiqingatha kwiMbeko yeeKumkani, utshilo uTencent
Imidlalo yeTencent igqibezele ukumiliselwa kwegama lokwenyani kwegama lomnye wemidlalo yayo ethandwayo, iHlonipho yooKumkani, ngo-Novemba ngo-19.
IMediaTek irejista ilahleko emva kokwehla kokuthunyelwa kweeprosesa zayo
Iirejista zeMediaTek ziyancipha ekuhanjisweni kweeprosesa zayo: IQualcomm ithatha umhlaba kwaye ibekwe njengophawu lokhetho.
IXiaomi Mi 8 SE ibonakala nge-Android Q kwiGeekbench: iyakufumana uhlaziyo xa kukhutshwa i-OS
I-Xiaomi Mi 8 SE ivele kwi-Geekbench ngenkqubo yokusebenza ye-Android Q. Emva kokuba le nguqulo ye-Android ikhutshiwe, ungayifumana.
IHuawei isungule ifowuni yokuqala enomngxunya kwiscreen: Isamsung iya kuphulukana nomdyarho
IHuawei ilungiselela i-smartphone yokuqala enomngxunya kwiscreen: iya kubetha i-Samsung, enye inkampani ekolu gqatso.
I-HTC iya kuqhubeka nokuvula iifowuni ngo-2019, nangona kubonakala kungenjalo
I-2019 iya kuba ngomnye unyaka we-HTC eneemobiles ezintsha ngokwesicwangciso sabo. Inkampani eqhubeka nokuba nobunzima, nangona izakuqhubeka nokunyanzelisa.
Tune i-Android yakho yeKrisimesi: Ungazikhuphelela njani iithowuni zekrisimesi mahala
Ifowuni eneekhamera ezili-16? I-LG inelungelo elilodwa lomenzi elilodwa
Fumana ngakumbi malunga nelungelo elilodwa lomenzi wechiza le-LG apho sifumana khona ifowuni eneekhamera ezili-16 zangasemva zokuthatha iifoto kuzo zonke ii-angles
I-SPC Baamba Gyro 4.0 sisicoci seerobhothi esine-Alexa kunye noMncedisi kaGoogle
Sivavanye iBaamba Gyro 4.0, isicoci sokucoca iirobhothi seSPC esihambelana neA Alexa kunye noMncedisi kaGoogle, nesicelo se-Android.
Uphengululo lwe-OUKITEL WP1
Sivavanye safaka i-OUKITEL WP1 kuvavanyo, "ifowuni erhabaxa" enekhamera ezimbini, ukutshaja ngaphandle kwamacingo, ibhetri eyi-5.000 mAh kunye nokuqinisekiswa kwe-IP68.
IHuawei isondela kwi-Samsung kwimakethi yehlabathi
Fumana ngakumbi malunga nokukhula kwentengiso kaHuawei, okusondela kufutshane ne-Samsung kweli candelo lentengiso.
I-Pixel 3 Lite ibeka kwifoto ecaleni kwePixel 3: ukufika kwayo kuya kusondela
Ukuqala kwethu ukuva malunga nefowuni, yayinegama lekhowudi 'uSargo', kwaye kwakusekuqaleni ...
I-Wiko View 2 Go yindlela kaWiko yokuzisa sonke isikrini kuluhlu lokungena, hlala nathi kwaye ufumane ukuba zeziphi iimpawu kunye namava ethu ngale smartphone.
I-Realme U1 Iimpawu ezichaziweyo: Uya kusebenzisa iMediaTek's Helio P70 eNtsha nangakumbi
I-Realme U1 iye yavuza inethi kunye neenkcukacha zayo zobuchwephesha kunye neempawu eziphambili- iya kusebenzisa iMediatek Helio P70 kunye nokunye.
Ubunewunewu obutsha busasazeka phakathi kwabavelisi: ngoku, iLenovo irejista ifowuni ngekhamera ngasemva kathathu
Omnye umenzi we-smartphone uza kujoyina imeko yangoku, eyokubonisa isiphelo esitsha esineekhamera zangasemva ezintathu, kwaye yiLenovo.
IHuawei P Smart 2019 iyavuza kwakhona, ngeli xesha, ngeKirin 710
IHuawei p Smart 2019 ivuza uthungelwano kunye ne-Kirin 710 engaphantsi kwesibhozo. Yazi zonke iinkcukacha!
I-SK Hynix yazisa ngemodyuli yokuqala ye-DDR5 DRAM yehlabathi-imveliso eqala kwi-2020
Isizukulwana sangoku seDRAM, i-DDR4, esikwabizwa ngokuba "kukuphindaphindwa kwedatha yedatha yesine", sele inendlalifa, kwaye ziimodyuli ze-DDR5 DRAM.
Ivenkile yokuqala yeXiaomi eMexico sele inomhla wokuvula
Fumanisa ngakumbi malunga nokuvulwa kwevenkile yokuqala yeXiaomi eMexico eza kubanjwa ngoDisemba, eqinisekisiwe yinkampani.
U-Oppo sele ebonakalise ngokusesikweni umaleko omtsha wokwenza ngokwezifiso, kwaye yi-ColourOS 6.0. Yazi zonke iinkcukacha kunye neempawu zale nto intsha!
Ibhola yePakethi yinto entsha engaqhelekanga evela kwimidlalo yeKetchapp, istudiyo sevidiyo ngokugqwesa kwimidlalo eqhelekileyo ...
Uvandlakanyo olunzulu lwevidiyo yeChuwi HiPad ngoku efumaneka ngaphezulu nje kwe- € 120
Njengoko sele nditshilo kwi-Unboxing kunye nokuqala kokubonakala kweChuwi HiPad, ixesha lifikile lokuba ndikuxelele ...
I-Samsung Galaxy A9 ngoku iyafumaneka eSpain
Isamsung isandula ukubhengeza ukubakho kweGalaxy A9 eSpain. Yazi iinkcukacha zexabiso layo kwaye ungayithenga phi!
Eyona midlalo mihle yangoLwesihlanu oMnyama eMovilshacks
Fumanisa izibonelelo zoLwesihlanu oMnyama esizifumana kwiiMovilshacks ezine-70% yezaphulelo kwiifowuni nakwizinto zoncedo.
IHuawei ibhalisa amagama amaninzi eModeli yeeFowuni zokuHlonipha zexa elizayo
IHuawei irejista amagama aliqela emodeli yekamva le-Honor smartphones. Yazi zonke iinkcukacha zezi ndaba.
Uthotho lweSamsung 'lweGalaxy M' luqala ukubonisa iimpawu zobomi: IGPS M2 iyavela kwiGeekbench
I-Samsung Galaxy M2 ekucingelwa ukuba iye yavuza iGeekbench ecaleni kwe-quad-core Exynos 7885. Zazi iinkcukacha.
I-Meizu 16S iya kukhutshwa kunye neadaptha enezinto ezahlukeneyo zomculo ngaphakathi
Umphathi we-Meizu uJack Wong uxele ukuba iMeizu 16S iya kukhutshwa nge-adaptha yomculo eyahlukileyo. Fumanisa!
Isikhumbuzo se-Monument Valley 2 kunye noMphathi weMotosport 3 nge-X 0,90 kwintengiso
Iintsuku ezi-7, zombini iMonument Valley 2 kunye noMphathi weMotosport 3 banokuthengwa kwiVenkile yeGoogle Play. Imidlalo emi-2 egqwesileyo.
I-Qualcomm's Snapdragon 4 iya kuziswa ngoDisemba 8150
Nge-4 kaDisemba le, iQualcomm iza kuzisa iprosesa yayo elandelayo yeflegi, iSnapdragon 8150. Funda ngakumbi malunga noku.
Indlela yokwabelana ngescreen somdlalo wakho nomhlobo ngePlayJ, usetyenziso olutsha lweSony
U-Sony usungule i-PlayJ, iqonga elitsha lokwabelana ngemidlalo yakho kunye nomhlobo omnye oza kuba nakho ukungqina ngokuhleka kwiikhamera.
Ezonaapps zilungileyo kunye nemidlalo eSpain eTheAwards
Fumanisa abaphumeleleyo kwezona zicelo zibalaseleyo kunye nemidlalo eSpain kuhlelo lokuqala lweTheAwards 2018 ebibanjwe nge-15 kaNovemba.
IAmazon Music Unlimited: Fumana iinyanga ezintathu zomculo nge-0,99 euro kuphela
Fumanisa okungakumbi malunga noku kukhuthaza iAmazon Music Unlimited kwaye ufumane ezinye iinkonzo ezinje ngeVidiyo yeNkulumbuso kunye nohlobo lwe-Kindle kwi-web.
IMotorola One iqala ukufumana iPie ye-Android eMexico
I-Android 9.0 Pie sele iza kwi-Motorola enye eMexico ngohlaziyo oluza nepaki yokhuseleko kaNovemba.
I-512GB Asus ROG Ifowuni ngoku iyathengiswa e-US
Ifowuni ye-Asus ROG ene-512GB yendawo yokugcina yangaphakathi yaziswa ngokusesikweni e-United States. Wazi amaxabiso kunye neenkcukacha!
I-Fortnite isungula kwaye iqhayisa ngemowudi entsha yomdlalo, kwaye 'yiWest West'
I-Fortnite isungula imowudi entsha yomdlalo 'weWest West', eza nezinto ezininzi ezintsha, izixhobo kunye ne-obtehos oza kuyisebenzisa. Sikuxelela iinkcukacha!
Ukunikezelwa kokuqala kokuvuza kwe-Meizu 16S kwi-Intanethi: ikhamera yangemva kathathu kwaye akukho notch okanye i-bezels yile izayo
I-Meizu 16 ingena ezihlangwini zayo: ukunikezelwa kwe-meizu 16S sele ivuza nje kwi-Intanethi kwaye ityhila ezinye zeempawu ezintle zoyilo.
IGoogle Pixel iya kugcina imibhalo ebhaliweyo ephendulwe nge-AI
Ungazisindisa ngokwazi umxholo weefowuni kunye neempendulo ezigcinwe ngePixels zikaGoogle.
Iingxaki ziyaqhubeka kwiPixel 3 kaGoogle: ngoku, isiphene sikhubaza ikhamera
I-bug kwiPixel 3 ibangela ukuba ikhamera isebenze kwaye ifowuni kufuneka iphinde iqaliswe. Yazi zonke iinkcukacha zesi sigwebo sitsha.
I-PUBG Imfono ihlaziywe kwi-0.9.5 ngemowudi entsha ye-hard-100 player kunye nokunye
IPUBG yeXesha leSelfowni le-4 liza ngomso, kodwa ngoku ungonwabela imo entsha enzima yokuhlaziywa kwePUBG yeFowuni.
I-OxygenOS Vula iBeta 7 ifika kwi-OnePlus 6 enemisebenzi emitsha nenomdla
Iindaba ezimnandi zabasebenzisi be-OnePlus 6: I-OxygenOS Open Beta 7 ngoku iyafumaneka kwezi zixhobo. Yazi iindaba eziza nazo!
UMeitu sele eza kuvula ifowuni eneekhamera ezintathu zangaphambili
UMeitu ulungiselela i-smartphone entsha; enye eza kufika ineekhamera ezintathu zangaphambili. Sandisa iinkcukacha.
I-Oppo's 'Hyper Boost' yokukhawulezisa itekhnoloji eza kwiifowuni ezisezantsi ezisezantsi kungekudala
Ngokukhawuleza u-Oppo uza kukhupha itekhnoloji yokukhawulezisa i-'Hyper Boost 'kwiifowuni ezahlukeneyo ezisezantsi. Zazi iinkcukacha.
Hlonipha uMlingo 2 ulawula imoto engenaqhubi ngenxa yombono weYYOYO
IHlonipho Magic 2 iphatha imoto ngaphandle komqhubi ngenxa yomncedisi wayo 'YOYO'. Zazi iinkcukacha.
Ixabiso elitsha le-Amena ngeefowuni ezingenamda kunye neSMS kunye ne-3GB yedatha ye- $ 14,95 / ngenyanga
Fumanisa ngakumbi malunga nenqanaba elitsha eliye lasungulwa ngu-Amena namhlanje, nge-19 ka-Novemba, ukongeza kukhuthazo lwesiqhelo lweKrisimesi kubathengi.
UXiaomi uphendula kwiscreen ingxaki yokudanyaza kweMi Mix 2S kwaye ucacisa ukuba kutheni isenzeka
IXiaomi Mi Mix 2S ineengxaki zescreen xa uthatha iifoto kunye nevidiyo kwisicelo sekhamera. UXiaomi uphendule koku.
I-PUBG Mobile iphumelele iGolide Joystick 2018 njengoMdlalo oShukumayo oGqwesileyo wonyaka
I-PUBG Imfono-mfono iphumelele iGolden JoyStick yoMdlalo oShukumayo oGqwesileyo ka-2018 ngokuchasene nomkhuphiswano wayo omkhulu, iFortnite. Ngokuqinisekileyo ibhaso lomdlalo omkhulu.
I-Nubia iza kuphehlelela umdlalo omtsha wokudlala ngo-Novemba 28, kwaye yiRed Magic Mars
UNubia ukuqinisekisile ukumiliselwa kweRed Magic Mars nge-28 kaNovemba elandelayo kumsitho. Yazi iinkcukacha zezi ndaba.
Amatyala aVulekileyo eNokia 9 aVumkileyo aMatyala aQinisekiso lokuCwangciswa kweekhamera ezi-5
Iikhamera ezi-5 ngasemva ziya kuba neNokia 9 PureView njengoko sisazi kumatyala e-silicone anokusetyenziswa nale fowuni.
Oku kukuphungulwa kwamaxabiso eorenji ngoLwesihlanu omnyama
Apha ngezantsi sikubonisa zonke izithembiso ezenziwa ngumsebenzisi weorenji ukuba zibhiyozele uMnyama ngoLwesihlanu
IMotorola Inye, ukubonakala kokuqala kwale ndlela yokuphula ixabiso
IMotorola ilwa umva kunye nemodeli enye, indawo enesakhono kakhulu eneempawu ezithintelweyo kunye noyilo oluphawulekayo. Siza kukuxelela ukuba yeyiphi imbonakalo yethu yokuqala.
Sibeka ibhetri yangaphandle ye-Mbuynow kuvavanyo, umthamo we-20.000 mAh okwazi ukutshaja i-smartphone yakho ukuya kuthi ga kuma-7 naphi na apho ukhoyo
UMark Zuckerberg ukhuthaze abaphathi bakhe ukuba batshintshele kwi-Android emva kwezimvo ezivela kuTim Cook
Iingxaki kulawulo lwedatha yethu kuFacebook, zibangele inani elikhulu leengxelo zezikhulu, ezithi ngamanye amaxesha zibe neziphumo zazo.
I-Asus Zenfone Max Pro M2 iya kuba yifowuni yokudlala kwaye iza kufika ngoDisemba 11
Iqinisekisiwe: i-Asus ZenFone Max Pro M2 iya kubetha kwimarike ngo-Disemba 12 njenge-smartphone ye-gamers.
I-Android Pie iyaqhubeka nokwanda: ngoku iyafumaneka kwiXiaomi Mi A2 kunye neMotorola Moto One Power
I-Android Pie ngoku iyafumaneka ukuze ifakwe kwiXiaomi Mi A2 kunye neMotorola One Power eIndiya. Sikunika iinkcukacha.
I-Samsung Galaxy S9 kunye ne-S9 + zifumana i-beta ye-UI enye esekwe kwi-Android Pie: uyifaka njani
Inguqulelo ye-beta yomaleko omtsha we-Samsung, i-UI enye, ngoku iyafumaneka kwi-Galaxy S9 kunye ne-S9 + kwaye isekwe kwiPie yePie.
Uyifaka njani ingxelo ezinzileyo ye-MIUI 10 kwi-Xiaomi Redmi Qaphela 4, Redmi Qaphela 4X kunye neRedmi Qaphela 6 Pro
Sikunika ukhuphelo kunye nokufakelwa konxibelelwano lwe-MIUI 10 Stable Global yeXiami Redmi Qaphela 4, Redmi Qaphela 4X kunye neRedmi Qaphela 6 Pro kwaye sichaza indlela yokufaka iiROM.
I-Huawei isandula ukubhengeza ukuba izokwazisa ngefowuni yayo yokuqala ye-5G kwi-Mobile World Congress kwi-2019. Nazi iinkcukacha.
Iindaba ezimnandi zeLatin America: UMIDIGI uya kufika kule ntengiso ngolwesiHlanu oMnyama ozayo kunye nezibonelelo zokuhamba kwawo kumazwe aliqela.
I-Qualcomm's Snapdragon 8150 idlula i-benchmark yamanqaku angama-360 lamawaka kwi-AnTuTu, yenye yezona ndawo zibalulekileyo.
Imbeko, uphawu lwangaphantsi lweHuawei, lubhengeze ukuba yayingoyena mdlali ubalaseleyo kwiSuku loSingles ngokwevolumu yentengiso kunye nengeniso.
Sihlalutya i-Samsung Galaxy A7 (2018), iikhamera ezintathu phakathi kuluhlu
I-Galaxy A7 ye-2018, i-terminal eneekhamera ezintathu kunye nepaneli yesizukulwane esilandelayo, hlala nathi kwaye ufumane awona manqaku amangalisayo kunye nakhanyayo kule smartphone.
IHuawei ilungiselela umncedisi wayo welizwi okrelekrele
IHuawei isebenza ubusuku nemini izisa umncedisi welizwi omtsha kwintengiso. Sandisa iinkcukacha zoku.
Ukuphonononga ikhamera ye-YI 4K + yesenzo
Sivavanye i-YI Technology Action Camera, i-YI 4K + iyakwazi ukubonelela ngento eyahlukileyo, ukurekhodwa kwe-4K kwii-60 fps, kuyamangalisa.
Imigangatho ye-5G iya kusetwa ngoDisemba wonyaka olandelayo kwaye iya kuvula iingcango zeemoto ezixhumeneyo kunye neefektri ezikrelekrele, ngokweSamsung.
Ukuba ungumnini we-OnePlus 5 okanye 5T, Siyavuyisana. Kungekudala uza kufumana uhlaziyo kwiPie ye-Android kwisixhobo sakho.
Amanye amarhe acebisa ukuba iMeizu iya kuba luphawu lokuqala lokumilisela i-terminal nge-Snapdragon 8150, kwaye iya kuba ngoDisemba walo nyaka.
Imbeko yeMilingo 2 ifumana uhlaziyo kwiPie ye-Android phantsi kweMagic UI 2.0, uguqulelo lwamva nje lomaleko wotyikityo.
Iinkcukacha eziphambili zivuziwe malunga ne-Asus Zenfone Max Pro (M2) kunye neZenfone Max M2
Ulwazi olutsha luza kukhanya malunga neefowuni ze-Asus ezizayo. Sithetha ngeZenfone Max Pro (M2) kunye neAsus Zenfone Max M2.
Ukubheja kweHuawei kwizimbo zomzimba
IHuawei iyaqhubeka nokuphucula i-EMUI kwaye iya kongeza uhlaziyo olukhulu lolawulo lomzimba kuninzi lwezixhobo zalo
Iibhombu zeNetflix: iimvavanyo ezinamaxabiso aphantsi kakhulu kwiifowuni kuphela
Inqanaba elitsha leNetflix linokusetyenziswa kuphela kwi-smartphone ngexabiso elingaphezulu kwehlisiweyo: sisiqingatha nje sexabiso langoku elisezantsi.
Ukuvuza kubonisa ukuba uAsus ulungisa iZenfone ngekhamera kathathu kunye nethebhulethi ye-10 OS ye-Chrome
Ngokwentelekelelo eyahlukeneyo, inkampani yaseTshayina, uAsus, isebenza nzima ukwenza ikhathalogu yayo ifowuni ene ...
Isamsung isebenza kwi-Samsung Galaxy S10 Lite, inguqulelo ye-decaf yeflegi yayo elandelayo eya kuthi ibonise izixhobo zekhompyutha ezinamandla ngokwenene.
IAlibaba inyuse phantse i-10.000 yezigidigidi zeedola kwiyure yokuqala yentengiso yoSuku lweeNgoma, eyaqala ngeCawa.
Ukunikezelwa kweXiaomi Mi 9 ivele kwi-Intanethi kunye neenkcukacha zayo kunye neempawu ezinokubakho. Bazi bonke!
Isamsung iphantse yalungela i-Galaxy S10 eza kufika noluhlu lweetekhnoloji ezintsha eziza kuyibeka kwindawo enelungelo.
I-Android Q iza kuza nokuphucula kwiscreen sokubonisa. Funda iinkcukacha zento entsha eya kwamkelwa yinkqubo yokusebenza kaGoogle elandelayo.
Okulandelayo sikubonisa zonke iinkcukacha zesiphelo sendlela elandelayo evela kwinkampani ye-Oukitel, i-U23.
I-OnePlus yokuqalisa ifowuni ye-5G kwi-2019 phantsi kwegama elitsha
Fumana ngakumbi malunga nokuqaliswa kwale fowuni ye-5G 2019G isuka kwi-OnePlus enegama elitsha eliza kuboniswa kwi-XNUMX,.
Isamsung isungule uluhlu lweefowuni zeGlass M kungekudala
Fumanisa ngakumbi malunga noluhlu olutsha lwe-Galaxy M eza kuziswa yi-Samsung kwimarike kulo nyaka uzayo, ukuvuselela uluhlu lwaphakathi.
Kungekudala uza kuba nakho ukucima imiyalezo oyithumela nge-Facebook kwisithuba semizuzu eli-10. Sikunika iinkcukacha.
IHuawei iza kuvula iifowuni ngekhamera yangaphambili engezantsi kwescreen
IHuawe isebenza ngokudibanisa ikhamera engaphambili kwescreen, ngokwe patent entsha evuzayo. Sikunika iinkcukacha.
Imenyu yokwabelana ye-Android iya kutshintsha kungekudala. UGoogle usebenza ukwenza indawo yoku ukuba ibe lula ngakumbi kubasebenzisi.
Iindaba ezimnandi, bantu. I-Android Pie iza kwi-Sony Xperia XZ yeNkulumbuso, i-XZ1 kunye ne-XZ1 Compact. Sikubonisa ukuba uyifaka njani kwisixhobo sakho.
I-Google Pixel 3 iyaqhubeka nokuba neengxaki: ngoku iyatshisa kwaye ivale ngelixa itshaja
IPixel 3 kaGoogle inengxaki yokutshaja. Ngokwabasebenzisi abo baxeliweyo, iyacima xa ishushu. Siyakwandisa!
I-LG Q9, ezi zinikezelo zingqina uyilo lwayo
Ukunikezelwa kuye kwavuza okubonisa uyilo lwe-LG Q9, udidi oluphakathi lomvelisi waseKorea olunokuboniswa kwi-MWC 2019.
Isinxibelelanisi se-UI esitsha seSamsung ekugqibeleni siya kufika kwiGPS S8 kunye neNqaku 9. Isinxibelelanisi esibheja kumxholo omnyama.
Fumanisa ngakumbi malunga nohlobo lwenzwa yeminwe eza kusetyenziswa yiSamsung kuluhlu oluphakathi kulo nyaka uzayo ngokusemthethweni.
UXiaomi uza kuqala e-UK ngokusesikweni nge-Mi 8 Pro kunye nezinye izixhobo ngo-Novemba ngo-9
IXiaomi Mi 8 Pro iya kuqala ngo-Novemba ngo-9 e-UK kunye nezinye izixhobo. Sikunika iinkcukacha zolu phehlelelo.
I-UI inye kukunxibelelana okutsha okuza ne-Android Pie kwi-Galaxy S9, Qaphela i-9 kunye ne-Galaxy S10 elandelayo. I-Galaxy S8 ishiywe ngaphandle kwayo.
Iscreen esingapheliyo kunye neselfowuni esongelayo yenza isidenge kulo lonke ukhuphiswano lwe-Samsung abasebenzise inotshi ukuzama ukuyila.
Imowudi yasebusuku okanye indlela yasebusuku yeXiaomi Mi Mix 3 iya kufumaneka, kungekudala, kwi-Mi 8, Mi 8 Explorer kunye neMi Mix 2S.
Fumana i-BQ nge-1 euro kuphela enkosi kuLwesihlanu oMnyama
NgoLwesihlanu oMnyama ungasifumana isixhobo se-BQ nge-1 euro, kuya kufuneka ubhalise kuLuhlu oluMnyama kwaye ukhawuleze yonke imihla.
Abanye abasebenzisi sele befumene ukhetho lokuxela iingozi kunye nee-radars kwiiMephu zikaGoogle: inqaku elitsha le-G.
Fumana ngakumbi malunga nezaphulelo kwiifowuni ze-OUKITEL kwitheko le-11.11. Izaphulelo ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-50 kuluhlu lwazo lwee-smartphones.
UXiaomi uyaqhubeka nokukhula. Inkampani yaseTshayina ibonakalisa impumelelo ebikade inayo kwaye iqinisekisa ubukho bayo kwiimarike zangaphandle ezingama-82.
Kwinyanga ephelileyo, abakwaNokia bazise iNokia X7 smartphone eChina. Ngoku, inkampani yaseFinland inokusebenza ...
Ulutsha lweXiaomi AirDots zii-headphone ezintsha zefemu yaseAsia ezinokufana okukhulu kwii-AirPods kodwa ngexabiso eliqhekezayo lomhlaba: i-25 euros.
Iinkcukacha ezithe kratya ziyavela kwi-HMD Global's flagship ezayo, iNokia 9. Ngoku, ividiyo entsha enikezela kunye nemifanekiso ilapha.
Iingxaki zememori zePixel 3 ziya kusonjululwa ngohlaziyo oluya kuthi luvumele ii -apps ezininzi ezivulekileyo kwakhona.
Yiya phambili nge-11.11 ngezona zivumelwano zibalaseleyo kwi-eBay
Thatha ezona zivumelwano zibalaseleyo kwiifowuni ze-Android kumsitho we-11.11 kwi-eBay ngaphandle kokulinda lo mhla kwivenkile edumileyo.
Qesha eyona nqanaba liphezulu kwiKhaya lakho likaGoogle
Ngaba unayo iKhaya likaGoogle ekhaya? Fumanisa ukuba leliphi elona zinga lifanelekileyo lokufumana uninzi kumncedisi oqinisekileyo kaGoogle.
IMotorola Moto One iyafumaneka ngoku eMelika. Yazi iinkcukacha zexabiso kunye nokufumaneka kwayo.
Iinkcukacha ezithe kratya zeNokia 9 PureView zityhiliwe: I-Android 9 Pie, iikhamera ezintlanu zangemva nangaphezulu
INokia 9 PureView iqhubeka nokuvuza kumnatha. Ngeli xesha, ngenkqubo yokusebenza yePie ye-Android 9.0 kunye negama lekhowudi: "iOlimpiki".
Ukucocwa kweempawu eziphambili kunye neenkcukacha eziza kuza neHon V20, isixhobo esisebenza ngokulandelayo esivela kwinkampani.
Uhlalutyo lwePOPTEL P10
Sikuxelela konke malunga ne-POPTEL P10, esona sitayile sinqabileyo, isiqinisekiso se-IP68, i-4 GB ye-RAM, unxibelelwano lweNFC nokunye okuninzi okungaphantsi kwe- € 200
Isamsung iya kuzisa iselfowuni sayo kunye nokusonga isikrini eSan Francisco kwiintsuku ezimbini. Isixhobo esiba yithebhulethi okanye iselfowuni.
Iinkcukacha zityhilwe malunga neQualcomm's SM7150 kunye ne-SM6150, iiprosesa ezilandelayo zokumiliselwa
I-Qualcomm ineeprosesa ezimbini ezilungele thina: i-SM7150 kunye ne-SM6150. Jonga iinkcukacha ezivuzayo kwesi sibini silandelayo ukuze usungule.
I-OnePlus 6T iyeza kungekudala ngombala omtsha
Fumana ngakumbi ngombala omtsha apho i-OnePlus 6T iza kuphehlelelwa khona kwintengiso emva kokuvuza kule mpelaveki kwiwebhusayithi yayo.
Isifundo esilula nesisebenzayo apho sikubonisa khona ukuba ungagcina kwaye ulawule njani amagama agqithisiweyo kunye neesenti kwiGoogle Chrome ye-Android.
Ukusebenza kwebhetri kwezixhobo ezitsha kuye kwehla xa kuthelekiswa nabandulelayo. Sikunika idatha eveliswe ziimvavanyo.
Fumanisa ngakumbi ngetshaja engenazingcingo eqaliswa yiMotorola, ehamba nefowuni yayo yokuqala yokutshaja engenazingcingo.
Uyilo lwe-Samsung Galaxy S10 sele igqityiwe
I-rumor entsha iphakamisa ukuba uyilo lwe-Samsung Galaxy S10 phantse ilungile. Sikuxelela iinkcukacha zale ngxelo yakutshanje.
Umncedisi kaGoogle akazukuza kwizithethi ze-Sonos kude kube yi-2019
Ukudityaniswa kwezithethi ze-Sonos kunye noMncedisi kaGoogle okwangoku kuya kufuneka zilinde kude kube sekuqaleni konyaka olandelayo, njengoko kubhengeziwe yinkampani.
Ukucoca ixabiso leXiaomi Mi 8 Lite eYurophu
Fumanisa ngakumbi ngexabiso eliza kuba nalo iXiaomi Mi 8 Lite ekusungulweni kwayo eYurophu kwiinguqulelo zayo ezimbini ezahlukeneyo.
IHuawei iyadityaniswa njengophawu lwesibini oluthengisa kakhulu
I-Huawei sele ithweswe isithsaba njengowesibini othengisa uphawu lwefowuni emhlabeni. Fumana ukuba bathengise kangakanani kwikota yesithathu.
I-Mate 20 Pro ifumana i-EMUI 9.0.0.126 ngophuculo oluninzi: sichaza indlela yokuyifaka
I-Huawei Mate 20 Pro ifumana i-EMUI 9.0.0.126 ngohlaziyo olutsha. Sichaza indlela yokuyifaka kwisixhobo sakho.
Kwakhona kuyaqinisekiswa ukuba i-WhatsApp iya kubonisa iintengiso. Fumana zonke iinkcukacha kwaye uthini uChris Daniels malunga nezi ndaba zimbi kwabaninzi.
I-AnTuTu isizisela inqanaba lee-smartphones ezili-10 ezinamandla kwinyanga ka-Okthobha kulo nyaka, apho ikhoyo iXiaomi Black Shark kunye nabanye.
Fumanisa imiba ekufuneka siyijongile xa ifowuni yethu ye-Android ingakhanyisi kwaye iyenze isebenze kwakhona.
Iqinisekisiwe: ngo-Novemba ngo-6, uNubia uzokwazisa i-Nubia Red Devils eSport njenge-smartphone yokudlala. Iya kuba ne-10 GB ye-RAM!
Sifuna ukwabelana nawe ngombono wethu wokuqala we-Samsung Galaxy A7 (2018), i-terminal eneekhamera ezintathu phakathi kuluhlu.
Iprosesa yokuqala ye-5G yeMediaTek sele inomhla wokukhutshwa
Iprosesa yokuqala yeMediaTek eya kuhambelana ne5G iya kuphehlelelwa kwintengiso ekupheleni kwe-2019 njengoko iqinisekisiwe yinkampani uqobo.
Iqinisekisiwe: ngo-Novemba olandelayo we-9, i-Samsung izakubamba umsitho e-China apho izokwazisa khona i-Samsung W2019, ifowuni ye-clamshell.
Iifowuni zeXiaomi sele ziza kuYoigo
Fumana ngakumbi malunga nesivumelwano phakathi kweXiaomi kunye neYoigo apho iifowuni zohlobo lwesiTshayina ziqala ukufumaneka kunye nomsebenzisi.
Ifowuni yokusonga ye-LG sele inomhla wentetho
Fumanisa ngakumbi malunga nomhla wokutyhilwa kwefowuni enokusonga ye-LG eyenzeka ngokusesikweni e-CES 2019 ngoJanuwari.
I-Honor isandula ukwazisa i-Honor Waterplay 8, ithebhulethi engenawo manzi enekhamera emibini efika kwintengiso ngexabiso elibi.
Sikwazile ukuvavanya ezinye iindlela ezi-3 inkampani ye-TWS ethi isinike zona ngee-headphone ze-bluetooth ezingenazingcingo, ucinga ngokuthenga enye?
Iindaba ezimnandi! INokia 6.1 Plus sele ifumene ngokusemthethweni iPie ye-Android 9.0. Ezinye izixhobo ziya kuyifumana.
UkuLawula kunye neNqoqo: Abadlali baya kufika ngo-Disemba 4 kunye nemodeli ye-freemium ekulindeleke ukuba iqhutywe kakuhle ngoBugcisa boBugcisa.
AbakwaSony bakwazile ukuthengisa iifowuni ezizigidi ezi-1.6 kwikota yesithathu yalo nyaka
U-Sony uyaqhubeka nokuthumela ilahleko enkulu kwicandelo le-smartphone. Ngeli xesha, ifemu yakwazi ukuhambisa kuphela iiterminal ezigidi eziyi-1.6 kwiQ3.
INokia 7.1 sele ifumaneka ngokusemthethweni kummandla waseMntla Melika. Zazi iinkcukacha kunye nexabiso lesi sigxina kweli lizwe.
Iindaba ezimnandi zabasebenzisi beNokia 6.1: I-Android 9 Pie ngoku iyafumaneka kwifowuni
INokia 6.1 sele ifumana uhlobo oluzinzileyo lwePie ye-Android 9.1. Yazi zonke iinkcukacha zezi ndaba.
Ukuba uthanda i-Twitter "ukuthandwa", hamba ucinga ngokuvalelisa kubo
Asinawo umhla othile, kodwa sele kukho iodolo enkulu evela kwizikhundla eziphezulu zeTwitter zokuphelisa "ukuthanda".
Uyenza njani imixholo emnyama yokuhamba kwemephu zikaGoogle: yintoni entsha kwiapp yemephu
Iimaphu zikaGoogle zihlaziyiwe ukuze uvule umxholo omnyama wokuhamba. Ngale ndlela unokuba nesitayile esiqhelekileyo.
UXiaomi uya phambili komdlalo: iPocophone F1 iya kufumana i-Android Q xa isungula
I-Pocophone F1 iya kuhlaziywa kwi-Android Q nje ukuba iphehlelelwe, ngokwesiqinisekiso esinikezwe ligosa eliphezulu lenkampani.
Ikhamera ye-Samsung Galaxy S10 ilungiselela ukumangalisa okukhulu
Isamsung isandula ukwazisa isizukulwana sayo esitsha se-ISOCELL sensors enokuthi inyuse ikhamera ye-Samsung Galaxy S10 kwaye izise isimanga esithandekayo.
IXiaomi Mi 8 Lite iqala uhambo lwayo lwehlabathi: ngoku iyafumaneka eFrance naseUkraine
IXiaomi Mi 8 Lite sele ifumaneka eFrance naseUkraine. Funda ngakumbi malunga nento ekhutshwe sisithethi sefemu.
Njengoko bekucwangcisiwe, nangona inkampani kuye kwafuneka ihambise umhla wokubonisa ngolunye usuku ukuze ingangqinelani ...
Fumana ngakumbi malunga nomhla wokuqaliswa kwefowuni yokuqala ye-5G eYurophu. I-brand iya kuba yeyokuqala kwintengiso.
UMeizu ucacisa ukuba kutheni ingazukumilisela isiphelo sendlela esikwaziyo ukuxhasa inethiwekhi ye5G kunyaka olandelayo. Yazi iinkcukacha zesi siqinisekiso sitsha.
Iflegi entsha ye-Oukitel yi-U23, i-terminal emele inotshi kunye ne-gradient yombala ngasemva.
Ukucaciswa kobuchwephesha be-Honor Magic 2 kukhutshiwe kwi-AnTuTu kutshanje. Funda malunga neempawu zoluhlu oluphezulu olulandelayo.
I-Android Oreo sele inguhlobo lwesibini olusetyenzisiweyo kwidatha entsha yokuhambisa i-Android
Fumanisa ngakumbi malunga nedatha entsha yokuhambisa i-Android epapashwe nguGoogle apho i-Android Oreo ikwindawo yesibini yesibini esetyenziswayo.
Sihlalutya i-Huawei Mate 20 Pro, ikhamera kunye nokuzimela ngeflegi
I-Huawei Mate 20 Pro iyaqhubeka nokujonga kakhulu kubasebenzisi kwiintsuku ezimbalwa emva ...
Uyibukela njani i-FC Barcelona vs Real Madrid kwi-mobile yakho
Sikhombisa indlela yokubukela i-FC Barcelona vs Real Madrid ezakudlalwa namhlanje nge-Okthobha i-28 nge-16: 15 ngeBein Sport.
Ivenkile yeXiaomi e-UK iya kuvulwa nge-10 kaNovemba. Fumana ngakumbi malunga nevenkile yokuqala yohlobo lwesiTshayina kweli lizwe.
Uyifumana njani ikhamera yeXiaomi Mi Mix 3 kwiMi 8 kunye neMi Mix 2S
I-Ciaomi Mi 8 kunye neMi Mix 2S ziya kufumana uhlaziyo olukhulu oluya kubavumela ukuba babe nekhamera ye-Mi Mix 3 esandula ukwenziwa.
Umdlalo wokusinda, umdlalo omtsha kaXiaomi kwisitayile sePUBG Mobile kunye neFortnite
Yintoni entsha evela kwiXiaomi: Umdlalo wokuSinda, umdlalo oza kujongana nePUBG kunye neFortnite kwaye unike inkampani yaseTshayina inkangeleko entsha.
U-Huawei akazange abhengeze amanqaku e-Mate 20's DXOMark kuba ayephezulu kakhulu
Amanqaku e-DXOMark eHuawei's Mate 20 awakhange abhengezwe njengoko ayephezulu kakhulu. Funda ngakumbi ngeenkcukacha.
I-Oppo A7: uhlahlo-lwabiwo mali oluvunyiweyo phakathi kuluhlu lusondele
Iimpawu, ii-specs, amaxabiso kunye nokufumaneka kwe-Oppo A7 ziphinde zavuza kwakhona. Funda konke malunga nesi sixhobo silandelayo.
Isamsung ayifuni ukushiya nantoni na kwimibhobho kunye nefowuni yayo entsha yokusonga iya kubo bonke. Siyazazi iinkcukacha ezintsha malunga nayo.
Iimpawu zokugqibela ze-OnePlus 6T
Njengesiqhelo, kwiintsuku ezimbalwa phambi kokunikezelwa ngokusesikweni kwe-OnePlus entsha, i-6T kwesi sihlandlo, zonke iinkcukacha sele zivuziwe.
I-iPhone Xr: ezi zezinye iindlela ezilungileyo onokuzifumana
Ukudityaniswa kweyona ndlela ingcono kwi-iPhone XR onokuyifumana kwimarike yoluhlu lwamaxabiso afanayo.
Iqinisekisiwe: uMlingo oBomvu 2 ovela eNubia uza kufika ngomthamo we-10 GB ye-RAM. Sikunika iinkcukacha zezi ndaba.
I-Xiaomi ifikelela kwizigidi ze-100 zeefowuni ezithengisiweyo kwihlabathi liphela. Fumanisa ngakumbi malunga nentengiso yohlobo lwaseTshayina kwihlabathi liphela.
Umahluko ophambili kakhulu we-Samsung Galaxy S10 kunye ne-Huawei P30 ziya kuxhotyiswa nge-12 GB ye-RAM. Fumanisa!
Umncedisi kaGoogle ngoku uyahambelana noYoigo
Iindaba ezimnandi zabasebenzisi bakaGoogle. Kwaye nguYoigo usandula ukubhengeza ukuba iinkonzo zayo sele zihambelana noMncedisi kaGoogle.
I-BestCrypt Explorer ikuvumela ukuba ufihle iifayile kunye nemifanekiso kwizikhuselo zegama eligqithisiweyo
Ifolda ekhuselekileyo ye-Samsung Galaxy ngomnye wemisebenzi emihle yokuba "nenkqubo yokusebenza" ngaphakathi ...
Isamsung isandula ukubhengeza iinkumbulo zayo ezintsha ze-RAM kunye nokugcinwa okuza kufika kwi-2020 kunye ne-2019 ngokwahlukeneyo kwisiphelo esiphakamileyo.
ImediaTek Helio P70: Inkqubo entsha evela kwiMediaTek. Fumana ngakumbi malunga neprosesa entsha yohlobo lwesiTshayina esele lubonisiwe namhlanje.
I-Snapdragon 675 isemthethweni. Funda konke ngale Nkqubo-kwi-Chip intsha evela kwinkampani yaseMelika iQualcomm, eza kufika kwangoko kunyaka olandelayo.
I-Samsung Galaxy S10s kunye neeprosesa ze-Exynos ziya kuba nebhodi yesekethe ye-SLP ephambili ngaphakathi yendawo engaphezulu. Siyakwandisa!
Ibhetri ye graphene kuthetha ukuba iya kubiza amaxesha ama-5 ngokukhawuleza kunebhetri ye-lithium-ion eqhelekileyo. Idabi elivela kwi-Samsung lokuguqula intengiso.
Eyona midlalo yoyikisayo yale Halloween 2018
Uthotho lwemidlalo eyoyikisayo ye-Halloween 2018 yokukoyikisa ukuba ufe okanye ungayiqondi indlela uloyiko lwengqondo olunokubakho ngayo.
Uluhlu lweetheminali eziya kuhlaziywa kwiPie ye-Android
Inguqulelo nganye entsha ye-Android ihlala ibuhlungu entloko kubavelisi abaninzi be-smartphone, ngakumbi ...
Kungekudala uya kuba nakho ukulibala ngokucinezela inqaku elinye emva kwelinye ukuze uzidlale ngokuzenzekelayo kuWhatsApp. Ukufika okupheleleyo.
Kukho ubuchwepheshe be-4 obuza kukhanyisa kwimakethi ye-smartphone egqithisileyo kwaye kwi-notch kuye kwaba yimana yabantu abafuna iindaba.
IXiaomi Black Shark 2 sele inegama elisemthethweni. Fumanisa igama eliya kuba nalo ifowuni yokudlala entsha yohlobo lwesiTshayina.
Iingxaki ezininzi ngeGoogle Pixel 3 XL: iingxaki zokwenza izinto ezininzi
Abasebenzisi beefowuni ezintsha zikaGoogle baxela iingxaki ngeGoogle Pixel 3 kunye nePixel 3 XL xa besebenzisa ulawulo lwemisebenzi emininzi.
Isamsung iyasebenza kwaye ilungiselela ifowuni ezayo yabadlali abazakuthi baboniswe ekupheleni kukaNovemba. Siyakwandisa!
INokia 8.1 iye yavuza iGeekbench ngeprosesa ye-Snapdragon 710, inguqulelo yamva nje ye-Android, kunye nomthamo ogqwesileyo we-RAM. Siyakwandisa!
IHlor Watch iya kukhutshwa nge-31 ka-Okthobha. Fumanisa okuninzi malunga nomhla oza kuyilwa ngokusemthethweni i-Honor Watch.
I-OPPO ikhohlisile kwiimvavanyo zentsebenzo. Fumanisa ngakumbi malunga nezenzo ezenziwa yibhrendi ngeefowuni zayo.
Yothusa! Isikrini seGoogle Pixel 3 senziwe yi-LG, inkampani esekwe eMzantsi Korea. Sikunika iinkcukacha!
Hlaziya i-OUKITEL WP2, enye erhabaxa nebhetri engenasiphelo
Sibeka i-OUKITEL WP2 kuvavanyo, i "all-terrain" i-smartphone ene-IP68 certification kunye nebhetri enkulu ye-10.000 mAh, ungaphoswa!
Iingxaki zokuqala zeGoogle Pixel 3 XL ngescreen kunye nezithethi
Iingxaki zokuqala ngeGoogle Pixel 3 XL sele ivele. Entsha eyenziwe yifowuni kaGoogle inesikrini kunye nemicimbi yesithethi.
I-Huawei Mate 20 Pro ifumana amanqaku aphezulu kunayo nayiphi na i-Android kwi-AnTuTu
I-Huawei Mate 20 Pro idlulile kwaye yafumana amanqaku angaphezu kwe-307K kuvavanyo lwe-AnTuTu, yenye yezona ndawo zibalulekileyo.
Kucacile ukuba asinakuze siyibone ifowuni ye-Samsung enotshi. Kwaye ngakumbi xa sisazi ukuba unamalungelo awodwa abenzi bokubeka ikhamera phantsi kwescreen.
Ukuba uneselfowuni enye ye-Android ngoku unokuba neGoogle «Intlalontle yedijithali»
Ukusebenza kakuhle kwidijithali zizixhobo ezininzi zokulawula ukusetyenziswa gwenxa kwexesha esihlala sinalo kwii-smartphones zethu.
Inzwa yeminwe ephantsi kwescreen seGPS S10 ye-Samsung yahlukile kuleyo isetyenziswa zezinye iinkampani ezinje ngeHuawei kwiMate 20 Pro yayo.
I-Huawei Mate 20 Pro, ukubonakala kokuqala kwesi sigxina sikhulu
Kwi-Androidsis sikulethela umbono wethu wokuqala malunga neHuawei Mate 20 Pro emva kokusetyenziswa kokuqala, hlala nathi kwaye ufumanise.
I-beta ye-EMUI 9.0 ngoku iyafumaneka kwiimodeli ezilithoba zeHuawei kunye neNhlonipho
U-Huawei ukhuphe i-EMUI 9.0 esekwe kwi-Android 9.0 Pie ukuya kwi-XNUMX yeHuawei kunye ne-Honor yefowuni. Sikuxelela ukuba ziziphi!
Khuphela i-YouTube Beta ngoku: zama iindaba zayo phambi komnye umntu
I-YouTube Beta ibhengeziwe namhlanje ukuze sikwazi ukukhuphela ingxelo yokuqala ye-beta yeqonga levidiyo ngokugqwesa.
Isikrini se-OLED sePixel 3 XL senziwe yiSamsung
Isikrini esinokusifumana kwiPixel 3XL entsha evela kumzi-mveliso we-Samsung endaweni ye-LG njengonyaka ophelileyo
Uhlalutyo lwetshaja engenazingcingo yeXiaomi 10W MAX
Sivavanye itshaja engenazingcingo yeXiaomi, iMi 10X Max, itshaja ehambelana neemodeli zentengiso yakutshanje ngenkangeleko esiyithandayo.
IHuawei Mate 20 ifumaneka kwiOrange kunye neHuawei Watch GT njengesipho. Fumanisa oku kukhuthazwa ngeorenji kude kube ngu-Okthobha 31.
Emva kweenyanga ezininzi ngamarhe, ngesiqhelo xa sithetha ngesiphelo esine-high-end, inkampani yaseAsia iveze uluhlu lweMate 20. Kwi-Androidsis siyithelekisa nolunye ukhetho oluphezulu kwintengiso.
IXiaomi Mi Mix 3 sele inomhla wentetho
Umhla wokubonisa weXiaomi Mi Mix 3 sele usemthethweni. Fumanisa ngakumbi malunga nomhla wokubonisa wolu phawu luphawu lweshayina.
I-Huawei Yonwabela i-9 Plus kunye neNwabisa uMax iyabhengezwa: amanqaku, iinkcukacha kunye namaxabiso
IHuawei ibhengeze iHuawei Yonwabele i-9 Plus kwaye bonwabele uMax, iiterminal ezimbini eziphakathi eziphakathi. Yazi iinkcukacha zabo kunye namaxabiso.
Ukuhluzwa kweenkcukacha ezahlukeneyo zeNubia X, iflegi elandelayo yenkampani yaseTshayina
Iinkcukacha ezininzi zobuchwephesha zeNubia X zisandula ukuvuza kwiGeekbenh. Funda malunga neempawu zomnxeba olandelayo kwinkxaso-mali yeZTE.
Iselfowuni entsha ye-Palm inomdla kubungakanani bayo obuncinci kunye ne-aesthetics egcinwe kakuhle. I-smartphone eyahlukileyo kunabanye abaninzi.
Inkampani yaseAsia i-Oukitel sele iza kwenza i-P23, isiphelo sendlela esivelileyo kwinkqubo yeMediaTek P23 kunye negradient ngasemva.
URazer ukhupha ingxelo ebonakalayo yeRazer Ifowuni 2
Umenzi wezinto zokudlala uceba ukumilisela uhlelo olukhethekileyo lwe Razer Ifowuni 2 enomva obonakalayo.
Ukucoca amaxabiso kunye nomhla wokukhutshwa kweHuawei Mate 20 Pro.Fumanisa ngakumbi ngexabiso lesiphelo esiphakamileyo eYurophu esiza kufika koku kuwa.
Ewe kuyakubakho ifowuni ebalulekileyo ebalulekileyo, kwaye iya kuphendula ngokuzenzekelayo imiyalezo
Ifowuni elandelayo ebalulekileyo evela kwinkampani kaAndy Rubin iya kuphendula imiyalezo ngokuzenzekelayo, ngokusekwe kwiingxelo zento ekusetyenzwa kuyo.
I-Google Pixel 3 iyakwazi ukuthatha iifoto zasebusuku ngaphandle kwesibane. Sikubonisa umlingo osemva kwayo enkosi kwiifoto zokubala.
Ukuqwalaselwa kumgangatho obalaseleyo weeselfies zeqela ezithathwe ngeGoogle Pixel 3
Ukuba ungumthandi weeselfies kwaye uyathanda ukuthatha ezo ntlobo zeefoto, iGoogle Pixel 3 yeyona fowuni ilungileyo okwangoku.
IAmazon ihambisa ngesixhobo sayo se-AI sokuqesha
IAmazon iyasinqumamisa ngokusisigxina isixhobo sayo semfihlo esinobukrelekrele bokuyisebenzisa ekukhetheni abasebenzi
Iindaba ezimnandi, eMexico: iXiaomi Redmi S2 iya kubetha ezivenkileni zeli
Igosa: iXiaomi Redmi S2 iza kufika eMexico kungekudala. Funda ngakumbi malunga nesiqinisekiso samva nje esinikezwe yinkampani nge-facebook.
Iselfowuni "ephezulu" ukusuka kwisizini ephelileyo iseyinto elungileyo
Ngaba ucinga ngokuhlaziya i-smartphone yakho? Ngaba uluhlu oluphezulu loluhlu alunakufikeleleka kuwe? Endaweni yoluhlu oluphakathi, umphezulu wonyaka ophelileyo lukhetho olufanelekileyo
IHuawei isandula ukubhengeza uhlobo olutsha lwebhetri: ILithium-Silicon. Oku kubhetele kakhulu kuneLithium-Ion yangoku.
I-Samsung Galaxy A9 (2018) iya kuziswa ngomso ngenkqubo yeefoto ezingasemva zeekhamera ezine. Funda ngakumbi malunga nokwenzeka.
Zonke iindaba eziboniswe nguGoogle
Ukuba uphoswe ngumsitho obanjwe nguGoogle izolo, kweli nqaku sikubonisa zonke iindaba zomsitho.
Ukuba unayo iPixel 3 kwaye uhlala eUnited States, uMncedisi kaGoogle uya kuphendula iifowuni zakho
IPixel 3 kunye nePixel 3 XL ngoku ziyafumaneka ngenqaku elimangalisayo: phendula iifowuni ezikufumanayo ngoMncedisi kaGoogle.
I-Honor 8C ibonakala kwi-VMall ngaphambi kokumiliselwa kwayo kunye neenkcukacha zayo kunye nemifanekiso. Funda konke malunga neselfowuni elandelayo yenkampani.
Iqinisekisiwe: Hlonipha uMlingo 2 uya kuba nenkxaso ye-40-watt yokutshaja ngokukhawuleza
I-Honor Magic 2 iya kufika kwimarike ngenkxaso yokutshaja ngokukhawuleza kwee-watts ezingama-40. Funda ngakumbi malunga nesiqinisekiso esinikezwe ngumphathi wefemu.
Isilayidi esitsha seGoogle Pixel: amanqaku kunye nayo yonke into malunga neethebhulethi entsha ene-Chrome OS evela kwinkampani. Yazi!
Ukuba ujonga iKhaya likaGoogle elinescreen, le yiHub yasekhaya. Ifumaneka ngokubhukisha ukusukela namhlanje ukuya ngqo ekhayeni lakho.